Isitudiyo esinesitayela, esisebenzayo, esihlanzekile futhi esithokomele. - I-Airbnb
Isitudiyo esinesitayela, esisebenzayo, esihlanzekile futhi esithokomele.
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Javid
U-Javid Ungumbungazi ovelele
Leli yifulethi elisanda kulungiswa elihlanzekile nelithokomele elinokunambitheka kwasempumalanga. Ifulethi lilungele izithandani kanye nengane eyodwa noma abantu abadala abangu-3. Ifulethi lisesitezi sesi-5. Impahla ingaphakathi kwemizuzu eyi-8 yokuhamba ibanga ukusuka esiteshini sikamasipala i-Elmlar Akademiyasi (izitobhi ezi-3 ukusuka enkabeni yedolobha) kanti isiteshi sebhasi esiseduze siphakathi kwemizuzu emi-3. Kukhona nezitolo eziningi ezahlukene zokudla kanye nezindawo zokudlela zasendaweni nezaphesheya, izindawo zobumnandi nezindawo zokudlela.
Ngihlala kwamakhelwane futhi ngingasiza uma kuphakama umbuzo. Umama uhlala esitezi esingezansi futhi uyatholakala ukuze asize. Ukhuluma isi-Azerbaijani, isiRashiya, isiTurkey nesiJalimane esiyisisekelo.
Ifulethi lisendaweni eyimizuzu eyi-10 ukusuka esiteshini esingaphansi komhlaba kanye nezindawo zokudlela eziningi zasekhaya nezaphesheya, amathilomu kanye nezindawo zobumnandi.
Ngizotholakala ocingweni nganoma yisiphi isikhathi futhi ngingahlinzeka ngokulanda esikhumulweni sezindiza uma ngicelwa amanani ahloniphekile.
UJavid Ungumbungazi ovelele